IINGCAMANGO ZOYILO LWEKHITSHI (ISIKHOKELO SOCWANGCISO LOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango zoYilo lweKhitshi (Isikhokelo soCwangciso lokuGqibela)
Iingcamango zoYilo lweKhitshi (Isikhokelo soCwangciso lokuGqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu soCwangciso loCwangciso lokuCwangciswa kweKhitshi (enemifanekiso) Ubeko, izimbo, imibala, ukuhonjiswa, imimandla, iikhabhathi, ukutyibilika, ukukhanya kunye nokunye. Ikhitshi asiyondawo yokulungisa ukutya kuphela, kodwa yindawo yokonwabela ukulungiswa kokutya. Ikhitshi elilungileyo alijoliswanga nje ekulungiseleleni ukutya kodwa linokuba sisiseko kunye nentliziyo yomzi. Yindawo apho abapheki banokupheka ngelixa bonwabela ukuba kunye nabahlobo babo kunye nosapho. Yindawo apho undwendwe lunokuhlala khona kwaye lonwabele incoko emnandi phakathi kwabo kunye nompheki kwaye inokuba yindawo apho iindwendwe kunye nabapheki badibana khona ukuze bonwabele isidlo.
Apha ngezantsi uzakufumana iingcebiso ngokudala ikhitshi lamaphupha akho. Ukulungisa ikhitshi lakho kwakhona kunganomdla kwaye kukunike ithuba lokufumana nje indawo okhe wafuna. Ezi ngcebiso zasekhitshini ziya kukunceda ukhethe imibala efanelekileyo, ukuhombisa, kunye nolwakhiwo ngokusekwe kukhetho lwakho. Ithemba lethu kukuba ezi zimvo zoyilo lwekhitshi ziya kukukhuthaza ukuba wenze ikhitshi lamaphupha wena, kunye nosapho lwakho lonke luyonwabele.
Amanyathelo acwangcisiweyo oCwangciso lweKhitshi
Iikhitshi zale mihla
Amakhitshi obuGcisa obuDibeneyo
Ikhitshi elinye leLayini (udonga olunye kunye nesiqithi)
Ikhitshi elinye elinesiqithi (nesiqithi)
Iikhitshi ezenziwe ngo-L
Amakhitshi a-L (kunye nesiqithi)
Amakhitshi amile U
C kunye neeKhitshi ezimile G
Vula iiKhitshi ezivaliweyo
Vula iiKhitshi zeConcept
Inxalenye-evulekileyo iKhontrakthi yamaKhitshi
Ungayikhetha njani kulwakhiwo lwekhitshi olusisiseko
Unxantathu woMsebenzi weKhitshi: Ubume beKhitshi eyi-Smart kunye ne-Ergonomic
Uyilo oluDumileyo lweKhitshi
Amakhitshi amhlophe eKhabhinethi
Iikhitshi zeKhabhinethi emnyama
Izikhokelo zoHlahlo-lwabiwo mali lweKhitshi
Imiphezulu yeetafile yekhitshi
Iindidi zezixhobo ezisetyenziselwa izinto zokubala
Izibonelelo zeentlobo ezahlukeneyo
Izinketho zoMnyango weKhabhinethi
Umthi onzima oqinileyo
I-Ceramic, i-Porcelain kunye neTye leTile
Indlela yokulinganisa iKhitshi lakho
Ukuqesha uMyili weKhitshi
Uyiqesha njani ikontraka elungileyo
Imibuzo yokubuza ikontraka yakho:
Imibuzo yokubuza ireferensi yekontrakta yakho:
Iingcebiso zokuGcina iMali kwiKhitshi yakho yokuLungisa kwakhona
Xa ucwangcisa uyilo lwekhitshi lakho, jonga izinto ozithandayo. Chonga isitayile seekhitshi osithandayo. Kuyanceda ukuqaphela uhlobo lobeko olunomdla kwisitayile sakho sokupheka kunye nendlela ofuna ukuyonwabisa ngayo. Abo banosapho olukhulu okanye abathanda ikhitshi lokuqokelela kunye nokunxibelelana baya kufuna ukucinga ngohlobo lwesicwangciso somgangatho esifanelekileyo.
Unokufuna ukubandakanya kwisicwangciso sakho naziphi na izinto eziyimfuneko okanye izixhobo zokusebenza ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho zokupheka eziqhelekileyo kunye nezinto ozikhethayo. Umzekelo abanye abantu banqwenela i-microwave enqunyanyisiweyo ngaphezulu kweetafile. Omnye umzekelo unokubeka isitovu ngqo ecaleni kwefriji enokuba nefuthe elibi kwindawo yakho yokusebenza. Isicwangciso sekhitshi kufuneka songeze kuyilo olupheleleyo lwendlu. Uyilo lwangaphakathi kufuneka luhambelane nombala kunye nobume bayo yonke indlu ukuze kugcinwe ubuhle kunye nobuhle ngokubanzi.
1. Yiba nombono wohlobo lwekhitshi onqwenelayo . Ungazoba usebenzisa iintlobo ze Iinkqubo zesoftware yoyilo lwekhitshi , okanye ungacela umyili oyingcali ukuba akuncede wenze uyilo olufanelekileyo lwendawo yakho. Qiniseka ukuba umfanekiso uya kuboniswa kumbono opheleleyo we-3D. Oku kubalulekile kuba isishwankathelo esineenkcukacha ekhitshini siya kukuvumela ukuba ubone owona mbono mithathu wekhitshi ukukunceda ukuba ube nomfanekiso ngqondweni woyilo lwakho.
2. Yiba nesicwangciso somgangatho esineenkcukacha ezichanekileyo nezichanekileyo. Oku kuyakuquka ukongeza imilinganiselo echanekileyo kwizinto ezibalulekileyo zekhitshi ezinje ngeendonga, iingcango, iifestile, iikhabhathi, kunye nezinto ezahlukeneyo zasekhitshini. Ngesicwangciso somgangatho esineenkcukacha esenziwe kumbono we-3D, uhlaziyo oluyimfuneko okanye utshintsho olunokwenziwa ngokufikelelekayo. Ungafumana Isoftware yoyilo lwangaphakathi simahla apha ukunceda ngokuyila igumbi kunye nezicwangciso zomgangatho.
3. Yiba nolwazi ngeekhowudi zokwakha ezikummandla wakho. Oku kwahluka ngokwamagunya ohlukeneyo.
4. Gxila kwiimfuno zakho kufuneka zize kuqala, kunokuba ufuna ukuhlala kuhlahlo-lwabiwo mali.
5. Ukulungiswa kwekhitshi lakho kuya kunyusa ixabiso lekhaya lakho. Nangona kunjalo, ezinye izinto ezihlaziyiweyo ziya kongeza ngakumbi kwixabiso lazo kunezinye. Jonga eyethu Isikhokelo seendleko zokulungisa iikhitshi ukukunceda uqonde eyona ndawo ilungileyo kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Ikhitshi yinxalenye ebalulekileyo yekhaya, apho kukho khona izinto ezifana nokupheka, ukulungisa ukutya kunye nokuhlamba izitya. Ngamnye unelungelo lokufumana ikhitshi elihle kwaye kubalulekile ukuba lakhiwe ngokuchanekileyo nangokucacileyo kuyilo. Realtors bahlala besithi ikhitshi liyakwazi ukuthengisa indlu. Akumangalisi ukuba kutheni, ikhitshi sisiseko sekhaya kwaye apho iintsapho zichitha ixesha elininzi zixhomekile kwaye ziyonwabisa.
Amaxabiso e-remodel yakho yasekhitshini angahluka kakhulu kuxhomekeke kwizixhobo kunye neempawu ozikhethileyo. Kubalulekile ukuba uyakubandakanya uhlahlo-lwabiwo mali xa uceba ukuba neprojekthi efana nokwenza ikhitshi.
Kufuneka ube nohlahlo-lwabiwo mali onokulusebenzisa ekuhlawuleni iindleko zokuthenga izinto zasekhitshini kunye nezinye izinto eziyimfuneko ekugqityweni kweprojekthi. Jonga le posi ngaphezulu Iingcebiso zokuphucula ikhitshi kubandakanya into ekufuneka ujonge kuyo xa uqesha umyili kunye nekhontraktha.
Ukusebenza kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo kunokuba yinto xa ucwangcisa ikhitshi lakho. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ubambelela koluhlahlo-lwabiwo mali ukuze ukwazi ukuhlawula iindleko ezifunekayo. Ukuba nekhitshi elisebenzayo nelinomtsalane kusenokwenzeka nokuba kuyilelwe kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo. Izinto ezinamaxabiso aphantsi onokuzithenga zisenokukhangeleka zimangalisa kwaye zisebenze iinjongo zazo xa kufikwa kwinkangeleko zombini kunye nokusebenza.
Xa uyila ikhitshi lakho ngexabiso engqondweni kufuneka uthathe ingqalelo, ukhetha izinto ezifanelekileyo kunye nokuthatha eminye yemisebenzi ukunceda ukunciphisa iindleko zeprojekthi. Uyilo lwekhitshi olunamaxabiso aphantsi lubiza ukusuka kwi-5000 yeedola ukuya kwi-15,000 yeedola kulungiso olupheleleyo ukuba uthatha omnye umsebenzi ngokwakho. Abo bafuna ukuqesha umyili kunye nekhontrakthi banokuhlawula ngaphezulu kwe- $ 20,000 ngomsebenzi opheleleyo.
Apha ngezantsi kukho iingcebiso ezibalulekileyo zokwenza ikhitshi ebiza kakhulu:
-Qiniseka ukuba uyahlulahlula iimfuno zakho kwiimfuno zakho. Yiba noluhlu lwezinto eziyimfuneko kunye nezixhobo kwaye uzenze ziphambili.
-Thathela ingqalelo izinto oza kuzisebenzisa. Umzekelo, unokufumana ukubukeka okufana ne-laminates endaweni yokuba nemabhile okanye izinto zegranite. Iiglasi zinokubiza, kutheni ungayi kwi-acrylic okanye iithayile xa ujonge uhlahlo-lwabiwo mali.
- Xa kuziwa emsebenzini, unokuwunciphisa ngokwenza ezinye zezinto ngokwakho ukunciphisa iindleko.
Ikhitshi eliphakathi lihlukile kwikhitshi yohlahlo-lwabiwo mali kuba sele ibandakanya ukwenziwa kwendawo ngokwezifiso, ukufaka iikhabhathi, ukutshintsha imigca yamanzi, okanye ukutyibilika. Ngokubanzi, phakathi kweendawo eziphakathi zokupheka iikhitshi kunokubiza ukusuka kwi-25,000 ukuya kwi-75,000 yeedola. Kule mali ungaqesha iikontraki ukuba zenze yonke imisebenzi kwaye ufumane uyilo lwekhitshi olunomtsalane. NgokukaRemodeling.com, umndilili wexabiso eliphakathi kuluhlu lweprojekthi yokulungiswa kwekhitshi okwangoku yi- $ 53,931.
Xa ujonga ikhitshi eliphakathi kwinqanaba eliphakathi, oko kuthetha ukuba uya kufumana ezona zinto zibalulekileyo ngexabiso eliphantsi ngelixa usebenza ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali. Unokuba nezihlalo ezenzelwe wena okanye izixhobo ezikumgangatho ophezulu ukuba nje uyakwazi ukubhatala iindleko. Izinto onokuzisebenzisa zingabandakanya i-countertop yamatye ephuculweyo okanye i-backsplash yeglasi. Ilitye linokubiza kodwa liya kuhlala iminyaka okanye amashumi eminyaka ngakumbi xa ifakwe kakuhle kwaye igcinwa. Iikhabhathi ezihlaziyiweyo zinokwenzeka ukuba iikhabhathi esele zikhona ziye zagqitywa okanye ikhabhathi ekumgangatho ophakathi ikhethiwe.
Ukulungiswa okuphezulu okuphezulu kwekhitshi isibhakabhaka ngumda. Kwiprojekthi yokulungisa ikhitshi ubunewunewu unokulindela ukuhlawula ukusuka kwi- $ 75,000 ukuya phezulu.
Uninzi lweekhowudi ezintsha zeekhitshi zibiza ngaphezulu kwe- $ 100,000 kwaye ukusukela oko abantu abaninzi bexabisa amaxabiso ekhitshi anqabileyo ayaqhubeka nokunyuka. Ngokutsho kweRemodeling.com, ixabiso eliqhelekileyo le-remodel ekhitshini ephezulu yi- $ 113,097.
Apha ngezantsi kukho iingcebiso zokufumana elona xabiso liphezulu kwikhitshi lokunethezeka:
-Faka i-countertop engaqhelekanga, njengoko inika umbono wokuqala ekhitshini. Kwikhitshi elikhulu ngokuqinisekileyo kuya kubakho indawo enkulu, ngenxa yoko ikhawuntari enomdla iya kuba nefuthe elikhulu.
-Ngokufanayo nobucwebe, izixhobo zekhompyutha ziyafuneka. Iziqwenga ezimbalwa ezikumgangatho ophezulu ziya kuyenza ukugqiba ukubukeka okunethezeka kwekhitshi lakho.
-Faka iikhabhathi ezenzelwe wena njengoko oku kuya kubonisa isitayile sakho kunye nokuzimela kwaye ikunike nekhitshi elifunwa kakhulu emva kwesiko. Ngokwezifiso, unokwenza indawo efanelekileyo yokunambitha yakho kwaye unikeze into ebalulekileyo xa ulungele ukuthengisa ikhaya lakho.
Amakhitshi athathwa njengentliziyo yekhaya yamakhaya amaninzi, kuba kulapho uninzi lweendibano zoluntu zenzeka khona. Kuxhomekeka kunambitheka kunye neminqweno yakho, unokukhetha kwimixholo eyahlukeneyo yekhitshi ukuze ufumane ezona zilungele wena. Nazi ezinye zeendlela ezaziwayo zekhitshi:
Eli khitshi linoyilo olunemigca elula yesitayile sangoku kunye neendawo zotshintsho ezibonisa ibhalansi kunye nemvisiswano. I-ambiance inikezela ngento entle yokuguquguquka. Amakhitshi emveli afakwa ngenkangeleko entle nasesikweni yamakhaya aseYurophu naseMelika eleshumi elinesibhozo, elineshumi elinesithoba, kunye nelamashumi amabini.
Jonga ezethu uyilo lwesiko lekhitshi igalari yeminye imifanekiso.
Ikhitshi langoku lithatha iindlela ezininzi zoyilo kwisitayile sanamhlanje kwaye lisebenzisa uninzi lweelayini ezicocekileyo ngokuchukumisa kwendabuko. Sebenzisa ezona zinto zintsha zivela ngoku, iikhikhini zangoku zikwinqanaba lokusika kwaye ziyaqwalaselwa ngoku. Olu luyilo ngokubanzi ludlala ngakumbi kwifom kwaye kugqityiwe kunekhitshi langoku. Isagcina inkangeleko entle kodwa kwangaxeshanye inikezela ngokuziva kuthambile kwaye kuphila.
Ukufumana ezinye izimvo jonga kwigalari yethu ye Iikhitshi zangoku
Iikhitshi zale mihla akufuneki zenze ikamva kodwa zifuna ukwakhiwa ngokweembono ezintsha. Olu hlobo lwekhitshi luyilelwe ukuba luncinci, lwanamhlanje kunye nejometri kulwakhiwo. Iimpawu zayo zibandakanya imigca ethe tyaba, i-asymmetry, kwaye ngokubanzi isilela ekuhombiseni okanye ekuhombiseni.
Izinto ezisetyenziswayo zihlala zenziwa ngumntu endaweni yezinto zendalo kwaye zibandakanya i-laminate, isinyithi, ikhonkrithi, ukufakwa kweglasi enqabileyo, i-chrome, i-linoleum kunye ne-lacquer. Kuya kubakho imibala eyahlukeneyo yeepelethi kunye nemixholo. Uninzi lweekhitshi zale mihla ziyilelwe ngeekhabhathi ezingenachaphaza, izixhobo ezilula, imigca ethe nkqo ethe nkqo kunye nobuhle bendalo bezinto ezinomtsalane. Jonga igalari yethu ye Uyilo lwangoku lwekhitshi
Amakhitshi amancinci anokuba nendawo encinci nangona kunjalo makhulu xa kuziwa kwisitayile kunye nokusebenza kakuhle. Isithuba sinokuthintelwa kodwa yindlela yokubanakho ukuba nesicwangciso sobuchule ekwenzeni ukubonakala kwekhitshi okunemisebenzi emininzi.
Ukuba nekhitshi elincinci akuyi kukuvumela ukuba wenze umsebenzi wesikolo wasekhaya, umsebenzi wokuhlamba iimpahla, okanye ukugcina iposi. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ujolise kwimisebenzi ephambili yekhitshi lakho nokuba yindawo yokupheka okanye yokulungiselela isidlo okanye ukuxhoma amaxesha okuphumla. Kubalulekile ukuba usebenzise izixhobo ezilinganisiweyo okanye ezitsha ezinje ngefriji, imicrowave, isitovu esitshisayo, kunye nesinki enye. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwandisa indawo encinci ekhitshini lakho.
Jonga igalari yethu ye uyilo lwekhitshi elincinci
Xa ucwangcisa ukuba nekhitshi yosapho, kubalulekile ukuba ibanzi. Oku kuyakusebenza njengendawo yabantu yokuhlanganisana. Itafile kufuneka ilingane apho usapho lunokusebenzisa khona ekutyeni ngakumbi ngamaxesha okuhlala kunye nokuphumla. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo yokuba nendawo yabantwana ekhitshini. Ikhabhinethi yabantwana ingafakwa efikelelekayo kubo ukuba bafikelele kwaye bafumane izinto ezifunekayo. Abantwana bayakuthanda ukunceda abazali babo ekhitshini njengoko bexelisa okanye ngokunceda kwinkqubo yokupheka. Izinto zokudlala zinokugcinwa kwikhabhathi encinci enokuthi isetyenziswe ngabantwana xa bedikiwe kukujonga ulungisa ukutya kwabo.
Yikhumbule imiqathango yokhuseleko. Kubalulekile ukuba nesitshizi sokucima umlilo ekhitshini esikude kude nesitovu. Iphaneli yebhodi ebhodini okanye ebhodini inokuhonjiswa apho amalungu osapho anokushiya nawuphi na umyalezo abafuna ukwabelana ngawo.
Uyilo lwekhitshi labapheki akufuneki lube nendawo enkulu. Yintoni ebalulekileyo kukuba uyakwazi ukwandisa ukusebenza kwendawo ukuze ulawule i-clutter, kwaye wenze indawo efanelekileyo yokusebenza. Indawo yokubala ibalulekile ekufikeleleni kwizitovu. Ngale ndlela, umntu unokuhambahamba kwaye abe nakho ukulungiselela izithako zokutya ngokufanelekileyo. Ukuba nobushushu kunye nokusika umhlaba onganyangekiyo ukuba usebenze kuyo kukwibhonasi enkulu yabo bapheka kakhulu. Ukugcinwa ngokufanelekileyo kwabo baneebhloko zeebhokisi zeebhokisi okanye ukungabikho kwamanqwanqwa okumelana nokunqanda kuyimfuneko ngokusebenzisa iibhodi zokusika xa usika kwaye ungasiki ngqo izithako kwi-counter.
Kuyimfuneko ukuba Uyilo lwekhitshi labapheki ukugcina nokugcina ngokufanelekileyo. Oku kuthetha ukuba izitya zasekhitshini, iimbiza kunye nezixhobo ezincinci zifakwa kakuhle kwaye izinto ezingcolileyo zicocwa kwangoko. Izixhobo eziza kusetyenziswa zixhomekeke kwindlela ubani aphila ngayo ngoko ke jonga izinto ozikhethayo xa uzithenga.
Iimpawu zalo zihlala zinesimbo saseMelika nangona kunjalo ezinye iikhitshi zolu hlobo zifana nendawo yokulala okanye yeekhabhathi. Olu hlobo lwekhitshi ludume ngokubonakalayo kwiingqolowa zomthi oqinileyo okanye ezimhlophe ezimhlophe ezinokusetyenziswa kwemithi, izitena, amatye, izixhobo zeediliya kunye nendawo yomlilo. Ezinye izinto zibandakanya iikhabhathi ezikwipineti yamaqhina, imiqadi yesilingi, nokuba nomthunzi otyebileyo omdaka, luhlaza, bomvu, namthubi. Bona eminye imizekelo Uyilo lwekhitshi ye-rustic apha, okanye ujonge eyethu ikhitshi leenkuni igalari apha.
Iikhitshi zaseMeditera zihlala zaziwa ngokuhombisa iikhabhathi zomthi ezikumgangatho ophezulu, umsebenzi ontsonkothileyo wethayile kunye nemibala yendalo kunye nemixube enika indawo entle kwisithuba. Unonophelo olukhethekileyo kufuneka lwenziwe ukufaka imibala yombala kunye nokugcina umxholo ukhanya kwaye ukhanya. Izinto zokubuyela umva zihlala zi-mosaic okanye i-terracotta tile kwaye zisetyenziselwa ukwenza umdla obonakalayo. Ezi khitshi zigxile kugcino kuba ubeko luhlala luqukethe izinto ezininzi, iimbiza kunye neepani zokuhombisa. Igumbi linokuhonjiswa ngokobuntu bakho kunye ne-vibe. Le khitshi inezinto ezivuthayo, iikhabhathi zokhuni ezifudumeleyo, iileyili ezenziwe ngepeyinti ngesandla, iisilingi ezinamacala, kunye nearcoves yokupheka.
Jonga igalari yethu ye Iikhitshi zaseMeditera
Ubuhle beekhitshi zaseAsia bubonakalisiwe ngokuzola kunye nokuzola okuzisa ikhaya kunye noyilo olucekeceke. Olu luyilo lungena kwiindlela ezahlukeneyo zasekhaya, kunokuba kuncinci okanye ngokwesiko. Ukuba nemibala eqaqambileyo yokukhanya kunye nebala elimnyama kunye nesiqithi esikhulu ngaphezulu senza ukuba kubonakale ngathi yiAsia. Ezinye izinto zibandakanya udonga oluhlaza-jade, ilitye lendalo, i-bamboo flooring, kunye neekhabhathi ezimnyama.
Iikhikhini zesitayile selizwe zichazwe ngcono njengokuziva zi-rustic kunye nezakhiwo ezivulekileyo zesicwangciso esinendawo eninzi yokutya kwasekuseni, iziqithi eziphakathi kunye nokutya-ekutyeni. Ezi ntlobo zamakhitshi zamkelekile kwaye ziyavuya. Iqukethe iikhabhathi zesiko ezinemibala eqaqambileyo okanye ekhanyayo kunye nekhabhathi enombala omdaka okanye opeyintiweyo onesinyithi okanye ucingo. Kukho iibhaskithi eziphothiweyo, izimbali zeentyatyambo, iiphaneli zebhodi yamaso, kunye nokubumba okuhombisa kunye nokushelisha. Imigangatho yenziwe ngomthi kwaye ukulungiswa kwayo kuhlala kuyintsimbi.
Jonga igalari ye Uyilo lwekhitshi yelizwe Apha.
Le ndlela yasekhitshini yaqala ngenkulungwane yamashumi amabini ekuqaleni njengempendulo kwimveliso yobuninzi bexesha le-Victorian. Ityebile ngezinto zomthi kunye nakwakhelwe ngaphakathi kunye neetayile ezenziwe ngesandla. Uyilo lwayo lujolise kubo bobabini ubuhle bomsebenzi kunye nezinto ezivela kwimithombo yendalo. Bona eminye imizekelo Ingcibi yekhitshi kweli phepha.
Isitayile setshintsho setekhitshi sidibanisa okwangoku kunye nezinto zoyilo zemveli kunye nokudibanisa ngaphandle komthungo nendawo yokutyela. Ezi khitshi zinokuba nolunye uhlobo lobeko. Jonga igalari yethu ye Uyilo lwekhitshi lotshintsho kweli phepha.
Ikhitshi lekhabhathi yindawo eyonwabileyo kwaye ipholile. Inika imvakalelo yokulula kunye nokuhlala ungakhathali kunye neempawu zayo ezahlukeneyo kubandakanya ibhodi yeebhondi, izixhobo zeediliya, imibala ethambileyo, imigangatho yeplanga, kunye neekhethini ezimibalabala kunye nezivakalisi. Uyilo lwayo lubonelela ngentuthuzelo enkulu xa kufikwa kumoya wokuzonwabisa.
Isitayela se-Art deco sifumana ukukhuthazwa kolu lwakhiwo lwaseFrance lwaseFrance ukusuka ngasekupheleni kweminyaka ye-1920, 1930, kunye neye-1940. Isitayile sigxininisa kwiifom zejiyometri zoyilo olukhulu nolumnandi. Iithiyetha ezininzi zemidlalo bhanyabhanya zisebenzisa uhlobo lwe-Art Deco kuyilo lwabo olukhulu kunye neepateni ezilinganayo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa uhlengahlengisa ikhitshi kukuba uza kuyibeka njani ikhitshi lakho elitsha. Ubeko lwekhitshi lakho kufuneka lithathe indawo esele ikho kwaye likunike indawo apho unokupheka kwaye ulungiselele ukutya ngendlela efanelekileyo. Uyilo lwekhitshi olulungileyo lukunika ikhitshi eliphangaleleyo nelisebenzayo elilungele ukujongwa kunye novuyo lokusebenza kulo.
Ubume bekhitshi bubume obenziwe ngokungqinelana nelungiselelo le-countertop, indawo zokugcina kunye nezixhobo. Esi sicwangciso somgangatho sinoxanduva lokwenza unxantathu osebenza ekhitshini kubandakanya nendlela oyenzayo xa usuka efrijini, uye esinkini, nakuluhlu lokulungiselela isidlo.
Uyilo ngokuqinisekileyo luya kuchaphazela ukusebenza kwekhitshi. Imisela ubulula bokupheka, ukutya, kunye nokuhlala ngaphakathi ekhitshini. Luxanduva lokubeka izixhobo, iikhabhathi, isinki, izinto zokubala, iingcango, iifestile kunye nefenitshala efana netafile nezitulo.
Apha ngezantsi kukho olona lungelelwaniso ludumileyo lwekhitshi:
Leli khitshi lodonga olunye luqhele ukwakhiwa kwekhitshi kumakhaya amancinci okanye kumagumbi. Ngokusisiseko, a ikhitshi elinye lodonga ibeka zonke izitishi zakho zomsebenzi eludongeni olunye. Ngelixa oku kunokuba lubeko olusebenzayo lwendawo encinci, ayisiyonto ilungileyo ukuba uyathanda ukwenza amalungiselelo okutya kube ngumsitho wentlalontle.
Uyilo lwekhitshi eludongeni olunye aluthathi nzuzo kunxantathu womsebenzi wasekhitshini. Ikhitshi yodonga olunye udonga zontathu indawo yokusebenzela kwindawo enye kunokuba nzima kubapheki abangaphezulu kwesinye ukusebenza ekhitshini lodonga olunye. Enye inzuzo kolu luhlu lwekhitshi kukuba iya kubonelela ngendawo esemgangathweni eyaneleyo yokongeza indawo yokutyela ukuze iindwendwe zithethe nompheki, nokuba akukho gumbi lokuba bancede umpheki.
Uninzi lwexesha, ikhitshi yodonga olunye isetyenziselwa ukuba nendawo efanelekileyo ngaphakathi kuyo yonke indlu endaweni yokuba nekhitshi elifanelekileyo. Ezi zixhobo zoyilo, iindawo zomsebenzi, kunye nezinto zokupheka ziindawo ezinokufikelela iingalo. Isithuba silinganiselwe ke kukho igumbi elincinci kuphela lokulungiselela ukutya kwaye uyilo lwayo lwenzelwe umpheki omnye. Kungcono ukusebenzisa olu lwakhiwo kwiindawo ezincinci ezinjengeamagumbi okanye izindlu apho ukupheka kubaluleke kakhulu.
Olu hlobo lwekhitshi luhlala lusetyenziswa kumagumbi aneendawo ezininzi ezikhoyo. Inika lula ukuba abantu basebenze kunye. Ukusekwa kwesi siqithi kunokwenzeka kumakhitshi anendawo eyaneleyo. Qiniseka ukuba unendawo eyaneleyo yabantu abadlulayo macala onke esiqithi. Iziqithi ezininzi zibonelela ngendawo yokuhlala kunye nezihlalo. Uninzi lwazo lubonisa izitovu, iisinki, okanye iitopu zokupheka.
Ngasentla ngumzekelo wolwakhiwo lwekhitshi olunye kunye nesiqithi kubandakanya isihlambi zitya kwaye uyatshona.
Uyilo lwekhitshi olwenziwe ngu-L lubonelela ngendawo eninzi eyongezelelweyo ongayisebenzisa ukongeza indawo yokutyela okanye isiqithi sendawo eyandisiweyo yokulungiselela, indawo eyongezelelweyo yentlalontle okanye ugcino olongezelelekileyo. Ikhitshi emile njengo-L ikwayinto entle yokwenza ikhitshi ukuba uyathanda ukonwabisa kwaye ukholelwa ukuba ukupheka ngumsebenzi wentlalo. Inkqubo ye- Ikhitshi elimile L ihlala ivuleleke kuyo yonke indlu okanye kwigumbi elilandelayo ukuze abapheki banxibelelane neendwendwe ngaphandle kokuba wonke umntu anyanzele ekhitshini.
Olu hlobo lwekhitshi lukhethwa ukuba lube bhetyebhetye ekuphekeni, ukuxhoma kunye nokonwabisa. Inemimandla emithathu enendawo eyaneleyo yokuphepha ukungqubana. Emlenzeni omnye kulapho isinki kunye namanzi esitya okucoca akhoyo. Umlenze wesibini uqulethe uluhlu lwegriddle kunye ne-oven esondeleyo kunye ne-microwave yendawo yokupheka. Isiqithi senza indawo entle yokusela okanye yokutyela ngendlela enokuba yenziwe ngayo ibe yindawo engaphantsi kwekhawuntara yewayini kunye nendawo ephezulu yebar. Isiqithi ngokunjalo sinokuba yindawo yesine xa ikhawuntari yayo esezantsi ifuneka njengomphezulu womsebenzi wasekhitshini.
Uyilo lobume be-L luthathwa njengenye yeendawo ezaziwayo zekhitshi kule mihla. Olu hlobo lwesakhiwo lusebenza kakuhle xa kukho indawo eninzi kunye nokwahluka kwayo kwenza ukuba kube lula nakweyiphi na into oyinqwenelayo. Uyilo lunekhabhathi ecaleni kweendonga ezimbini ezikufutshane. Akukho zithuthi zenyawo zinqumla kunxantathu womsebenzi. Uyilo lubonakalisiwe kwiindonga ezimbini ezijikelezayo ezibandakanya umlenze omnye omfutshane kunye nomlenze omnye omde. Ivumela abapheki ababini ukuba basebenze ngaxeshanye ngaphandle kokungena ngendlela nganye.
Ngokufana nekhitshi yesitayile segalali, ikhitshi emile njengo-L isebenzisa iindonga ezimbini zomsebenzi wakho, kodwa ngokungafaniyo nekhitshi eline-galley, ezi ndonga zimbini zibekwe engileni, azijonganga. Olu hlobo lwesakhiwo sekhitshi lubonelela ngendawo eninzi apho abapheki ababini okanye nangaphezulu banokusebenzisana ngokulula kwizikhululo zomsebenzi ezahlukeneyo.
Umzekelo ongentla ubonakalisa ubume bekhitshi obume ngo-l kunye nesiqithi esiqulathe uluhlu olwakhelweyo.
Uyilo lwekhitshi e-U-Shaped ngamanye amaxesha lubizwa ngokuba yi-C-Shaped okanye ikhitshi yehashe. Kolu hlobo lobeko lwekhitshi, iindawo zakho zokusebenza ezintathu zisasazekile ecaleni kweendonga ezintathu ezimile okwe u okanye u c. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa olu lwakhiwo lwekhitshi, uya kudinga iindonga ezintathu ezikhoyo apho unokubeka khona izithuba zakho zomsebenzi. Olu luhlu lubonelela ngendawo eninzi yokusebenza kunye nokugcinwa njengoko kukho indawo yeetafile ezintathu kunye nemigca emithathu yekhabhinethi.
Ngelixa olu uyilo lwekhitshi lungavumeli ukufakwa kwendawo yokutyela ekhitshini, ivumela abapheki abangaphezulu kwesibini ukuba basebenze ngaxeshanye. Kwakhona, indawo evulekileyo emilenzeni ye u ivumela ikhitshi ukuba livulelwe kwigumbi elidibeneyo- njengegumbi lokutyela. Oku kuvumela abapheki kunye neendwendwe ukuba babonane kwaye banxibelelane ngaphandle kokuxinana kwindawo yekhitshi.
UKUYA Ikhitshi elimile U Uyilo olulungileyo ukusebenzisa ukuba ufuna ukufaka isiqithi kuyilo lwakho lwekhitshi. Ungasibeka esiqithini kude nodonga lwesithathu kwindawo evulekileyo phakathi kwemilenze yase-U. Oku kuqinisekisa ukuba awuthathi ndawo iphantsi ejikeleze izitishi zomsebenzi kodwa ikunika indawo yokusebenza eyongezelelweyo kunye nendawo yokugcina kwaye ibe yindawo apho iindwendwe zinokuhlala khona.
Olu hlobo lwekhitshi lulungele abapheki abaxakekileyo kuba luyanceda ekugcineni yonke into ikwindawo ekulula ukufikelela kuyo. Ingqonge umpheki kunye nendawo yokubaleka kunye nezixhobo. Isebenzisa iindonga ezintathu ezizeleyo ukwandisa zombini indawo yokugcina kunye nendawo yokusebenza. Ingasetyenziselwa amagumbi amancinci okanye amakhulu. Iikhitshi ezimile u-U zifanelekile ngokufanelekileyo kwiikhondomu okanye kwizindlu zethambeka.
Ubume be-C kunye no-G bufana nobume obunemilo ye-U, enendawo efanayo yokubala kunye nokukhethwa kokugcina okujikeleze umpheki kumacala omathathu. Umahluko wawo kukuba usingasiqithi okanye udonga lwesine olongezelelekileyo longezwa kwiikhabhathi ezongezelelweyo. Lo mmandla unokuvula okuncinci apho abantu banokungena kwaye baphume kwindawo yekhitshi. Inkqubo ye- usingasiqithi wasekhitshini inokusetyenziselwa ukubamba iindwendwe, ukutya, ukubamba izixhobo, kunye nemisebenzi njengendawo eyongezelelweyo yomsebenzi.
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa umzekelo wobume bekhitshi obume ngo-C kunye nosiqithi oqhotyoshelweyo kunye noyilo lonxantathu lomsebenzi.
Ikhitshi elenziwe ngo-G ngokusisiseko linekhitshi elimile u elinomlenze owongezelelweyo omfutshane omfutshane. Umlenze wesine uqhotyoshelwe kwi-engile ukuya komnye wemilenze yase-U. Njengokuba lo mlenze wesine mfutshane kuneminye imilenze, ushiya isikhewu esisebenza njengendawo yokungena yendalo ekhitshini emile njengo-G.
Njengekhitshi emile njengo-U, ikhitshi emile ngo-G lolunye uyilo olukhulu lwasekhitshini kwindlu enabapheki abaninzi. Umlenze wesine unokusetyenziswa njengendawo eyongezelelweyo yomsebenzi okanye njengendawo yentlalo kunye nedinning. Uhlobo oluthandwayo lokuba nomlenze wesine kuyilo lwekhitshi olumiliswe ngu-G kukuba ibe kukunqunyulwa kwesiqingatha sodonga endaweni yodonga olupheleleyo ukuze isetyenziswe njengesitena sakusasa apho undwendwe lunokuxhoma khona lubukele Abapheki bayasebenza.
Isimbo seGalley okanye ipaseji lolona hlobo lubalaseleyo lobeko lwekhitshi kwindawo encinci enje ngento onokuyifumana kwiikhondomu, ezindlini okanye ezindlwini ezincinci. Kwi Isitayile seGalley , Ngokusisiseko uneendonga ezimbini ezijonganayo. Ezi ndonga zimbini kulapho ubeka khona indawo osebenzela kuyo. Udonga lwesithathu luhlala luvulekile ukuvumela ukufikelela ekhitshini ngelixa udonga lwesine, ludonga olucacileyo.
Ngelixa eli khitshi lisenokulandela unxantathu womsebenzi wasekhitshini, ayisiyonto intle kakhulu ukuba kuya kubakho abapheki abaninzi abasebenza ngaxeshanye. Ngenxa yokuba iindawo zokusebenza ekhitshini le-galley -style zibekwe kwiindonga ezifanayo, indawo yomgangatho ivalwe kwisiqwenga sesithuba okanye ipaseji phakathi kwezithuba zomsebenzi. Ngenxa yoku, ukuxinana kunokuba yingxaki ekhitshini yesitayile segalali kwaye kuya kuba nzima ukuba nabapheki abangaphezulu kwesinye okanye ababini abasebenza ngaxeshanye. Kwakhona, ikhitshi eline-galley likhitshi KUPHELA; akukho gumbi lendawo yokutyela ngolu hlobo lobeko lwekhitshi.
Ngokwesiko, iikhitshi ze-galley zimxinwa kwindalo. Inee-top top counter counter ezibandakanya indawo yokuhamba embindini. Olu lwakhiwo luyasebenza kodwa lunendawo encinci yokulinganisa ekhokelela kutrafikhi yeenyawo. Indawo ibonakala incinci yiyo loo nto kufanelekile ukuba kusetyenziswe imibala ekhanyayo ekhitshini ukuze ibe nomoya ovulekileyo nomoya.
Ukwenza ikhitshi elibonisa ukuba likhulu libonakala likhulu kuya kufuneka lisebenzise elimhlophe okanye imiphezulu yeetafile steel stainless , i-backsplash enemibala, kunye neekhabhathi ezineglasi ngaphambili. Imibala emnyama inokusetyenziselwa iikhabhathi, nangona kunjalo kuya kufuneka uqiniseke ukuba ucima umbala ngodonga olungathathi hlangothi, isitopu sokukhanya kunye nokukhanya okuhle ngaphezulu.
Uninzi lwabathengi basekhaya kwezi ntsuku bakhetha uyilo oluvulekileyo lokuyila ikhitshi lokuzonwabisa kunye nokunxibelelana nabahlobo kunye neentsapho. Uyilo lomxholo ovulekileyo kukuseta negumbi elikhulu elivulekileyo kwindawo yokutyela ekhethiweyo kunye nendawo yokuhlala. Umxholo ovulekileyo uvumela umpheki ukuba athathe inxaxheba kulonwabo lwaphambi kokutya. Ngelixa ikhitshi elivaliweyo libonelela ngokwahlukana kwindawo ephambili yokuhlala. Ulungelelwaniso lwezi zinto zimbini yikhitshi evulekileyo ekwabizwa ngokuba sisimbo sotshintsho esibandakanya igumbi lekhitshi kunye nendawo yokutyela kunye.
Iikhikhini zomqondo ovulekileyo zithandwa kakhulu kwezi ntsuku. Ubume bengqondo evulekileyo ngokubanzi kubandakanya indawo yokuhlala enkulu evulekileyo ukusuka ekhitshini ukuya kwindawo yokutyela okanye kwigumbi losapho. Uyilo loyilo lukhetho olukhulu kwabo bathanda ukonwabisa njengoko uyilo oluvulekileyo lwenza ukuba incoko kunye nokuhlala kube lula kakhulu. Ukongeza iyanqweneleka kwiintsapho ezinabantwana abancinci ukuze zigcinwe zikufutshane ngelixa zilungiselela ukutya. Umqolomba koku kuyilo oluvulekileyo lwenza ukuba kufuneke ukugcina ikhitshi ecocekileyo kubaluleke ngakumbi. Bona imifanekiso engaphezulu iikhitshi zomqondo ovulekileyo Apha.
Uyilo oluvulekileyo ngokungagqibelelanga okanye i-hybrid ivumela ukufikelela okuvulekileyo kwigumbi lokutyela kwaye kuhlala kuvaliwe ngandlela thile ziikhabhathi, usingasiqithi kunye nezixhobo.
Uyilo oluvaliweyo lwekhitshi lwale khitshi emileyo u lubonelela ngegumbi elininzi lekhabhathi kunye nonxantathu omkhulu womsebenzi.
Apha ngezantsi kukho uhlobo lwemibuzo yobuntu ekhitshini yokunceda ukufumanisa iimfuno zakho kunye nencasa yakho. Xa ucinga ngoyilo ofuna ukuba nalo ekhitshini lakho, jolisa ekuphenduleni le mibuzo ilandelayo:
• Ngubani oza kusebenzisa ikhitshi yonke imihla?
• Bangaphi abantu abazakusebenzisa ikhitshi yonke imihla?
• Eyona khitshi iza kusetyenziselwa ntoni? Ukulungiswa kokutya? Ukuhlalisana? Ukutya? Umxube wezimbini okanye ngaphezulu?
• Nguwe wedwa umpheki kusapho?
• Unabahlobo bakho abathanda ukupheka?
• Ungathanda ukuba nendawo yokutyela ekhitshini?
• Ingaba ikhitshi kufuneka lahlulwe endlwini?
Xa ufumanisa ukuba ngubani oza kusebenzisa ikhitshi lakho kwaye izakusetyenziselwa ntoni ikhitshi, kuya kuba lula ke ukufumana ukuba zeziphi na kwezi ndlela zilandelayo zokubeka ikhitshi ekufuneka uzisebenzisile kwimodemu yakho yasekhitshini. Ewe ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kubungakanani kunye nokumila kwendawo osebenza kuyo. Emva kokuba ugqibe ubeko olusisiseko lwakho ungaqhubeka ukugqiba kunye nezixhobo.
Umbutho ubalulekile kwindawo yasekhitshini. Oku kunokumnceda umntu lowo ekwenzeni ukulungiswa kokutya okanye ekuphekeni egudileyo. Imimandla ithathwa njengendawo esekhitshini apho kuphekwa okanye kusetyenzwa khona.
Isicwangciso esisisiseko kunye nesona silumkileyo sokuyilwa kwekhitshi ekufuneka siyilandele kukuqinisekisa ukuba unxantathu wasekhitshini. Unxantathu osebenza ekhitshini ulumkile kuba uyasebenza. Iqinisekisa ukuba unendawo eyaneleyo ekhitshini lakho ukuze wenze ukupheka kube lula kwaye ugcine ukugcwala kubuncinci.
Kukho amanqaku amathathu aphambili kunxantathu osebenza ekhitshini kwaye ezi zezona ndawo zintathu ziphambili zomsebenzi: indawo yokulungiselela (ilawulwa yifriji kunye nekhawuntara yomsebenzi), indawo yokuhlamba (isinki) kunye nendawo yokupheka (isitovu). Njengomgaqo oqhelekileyo wobhontsi umgama phakathi kwezi ndawo zintathu kufuneka ungabi ngaphantsi kweenyawo ezi-4 kwaye ungabi ngaphezulu kwe-9 yeenyawo. Itotali yazo zonke izithuba phakathi kwala manqaku zimalunga ne-12 ukuya kwi-26 yeenyawo. Ukuba umgama phakathi kwale mimandla mfutshane kakhulu, indawo yakho yekhitshi iya kuziva icinene, ukuba inkulu kakhulu, ngekhe ukwazi ukuhamba ngokulula ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Lo ngumbono osetyenziselwa ukumiselwa kobume bekhitshi. Yenziwa ngesinki okanye kwindawo yokuhlamba izitya, umphezulu wokupheka okanye uluhlu lokupheka, kunye nefriji okanye isikhenkcezisi. Amanqaku amathathu, kubandakanya imigca yokucinga phakathi, yenza unxantathu womsebenzi. Umbono wayo kukuba ikhitshi lenzelwe ukusetyenziswa ngokulula nangobunono, ngokubonelela ukuba ezi zinto zintathu zikufutshane enye kwenye kodwa zisondele kakhulu. Njengomgaqo oqhelekileyo, umgama phakathi kwamanqaku amathathu kufuneka ubesusuka kwiine ukuya kwezisithoba iinyawo kwaye isixa samacala amathathu kufuneka sifike ukusuka kwishumi elinesithathu ukuya kumashumi amabini anesithandathu iinyawo. Unxantathu osebenzayo ufezekiswa kulungelelwaniso olwahlukeneyo ngokuxhomekeka kukhetho kunye nokumila kwegumbi.
Uyilo lommandla lubonwa njengolwandiso lwexantathu yomsebenzi weklasikhi. Yindlela ebonakalayo yokubeka izinto ngokwamaqela ekhitshini ngokudibeneyo ngokweendawo ezicwangcisiweyo. Olu luvo lunika isibonelelo sabapheki abaninzi kunye namaziko okusebenza.
Ujoliso loyilo lommandla kukwizinga elipheleleyo lezixhobo, izixhobo, kunye nokulungiswa kwemibhobho yamanzi. Ikwaqwalasele neminye imisebenzi enokwenzeka kwindawo yekhitshi kubandakanya ukwenza umsebenzi wasekhaya, ukonwabisa, ukutshaja iifowuni eziphathwayo, kunye nokunye okuninzi.
Apha ngezantsi kukho imimandla yomsebenzi osisiseko onokuthi usebenzise ikhitshi lakho:
Indawo esetyenziswayo Yindawo esetyenziselwa ukugcina uninzi lokutya. Oku kungohlulwa kubengaphantsi kwemimandla emibini yesikhenkcisi yokugcina ukutya okutsha kunye nendawo yokugcina ukutya okanye iikhabhathi zokutya zokugcina ioyile kunye nezinye izinto ezomileyo.
Indawo engasetyenziswanga -Le ndawo isetyenziselwa ukugcina izitya ezisetyenziswa mihla le. Ezi zitya zibandakanya izitya, iipleyiti, izinto zesilivere kunye neglasi.
Indawo yokucoca - Kulapho iifayile ze- isinki yekhitshi kwaye i-dishwasher ingafumaneka. Ukuhlanjwa kwezinto zasekhitshini kunye nezixhobo kungenziwa kule ndawo. Unokuba nefriji yakho ekufutshane nale ndawo ukulungiselela ukutya okulula. Ngapha koko, ukuba kufutshane ne-hob kukuvumela ukuba ube nokufikelela okulula ekufunxeni imifuno kunye ne-pasta.
Indawo yokulungiselela -Yindawo yekhitshi apho uninzi lwamalungiselelo ekhitshini lwenzeka khona. Oku kungabonakaliswa kwisiqithi sekhitshi okanye i-countertop.
Indawo yokupheka - Kulapho i-oveni, isitovu-phezulu, okanye uluhlu lukhona. I-microwave inokufumaneka kule ndawo. Lo mmandla kulapho ukufudumeza, ukujija, ukubilisa, ukupheka okanye ukupheka kwenzeka. Qiniseka ukuba uya kuthintela ukuwela ikhitshi ngeepani ezishushu kunye neembiza. Thathela ingqalelo ukubeka i-oveni kunye ne-hob kufutshane nesinki nakwiindawo zokusebenzela.
Injongo yokwahlula ikhitshi ngokwemimandla eyahlukeneyo kukuba nendawo efanelekileyo yokugcina izinto zasekhitshini kunye nezixhobo kunye nokuphucula ukuhamba kokupheka.
Njengengxenye yokucwangcisa ikhitshi lakho, kubalulekile ukuba usete imo yekhitshi ngombala ogqwesileyo olungele isitayile sakho kunye nobuntu bakho. Ungalitshintsha ikhitshi libe li-bland libe nesibindi ngokutshintsha nje imibala yepeyinti ekhitshini . Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo igumbi lonke xa ucwangcisa imibala yasekhitshini kwaye oku kubandakanya umgangatho, iindonga, iikhabhathi kunye neetafile. Unokufunda ngakumbi malunga nezinto zamva nje Imibala yemibala yasekhitshini kweli phepha.
Uyilo lwangoku lwekhitshi luhlala lutshintsha. Into ekuyo kwisitayile kulo nyaka ayinakuhlala ihleli kwisitayile nokuba yiminyaka embalwa ezayo.
Thatha ingqalelo kwezi ndlela zekhitshi ziphezulu ze-2018:
-Yila ukubukeka okumanyeneyo- qiniseka ukuba uyilo lwekhitshi luyangqinelana namagumbi akufutshane.
- Yiba neenkcukacha ezibengezelayo - ezona nkcukacha ziphambili kunye neziqwenga zezinto ezisekhitshini zizinto ezitsalwayo, amaqhina nezibambo. Qiniseka ukuba uya kusebenzisa izixhobo ezifanayo kwigumbi lonke ukufana kwaye unokukhetha isinyithi, igolide yobhedu, igolide evukile, okanye ubhedu.
- Ngaphezulu kokukhanyisa okuphezulu-kungcono ukusebenzisa iipendenti ezinkulu ezijikelezileyo kunye nesibane sobugcisa ngaphezulu kwesiqithi, i-countertop, okanye itafile yokutya. Oku kukuqikelelwa kwesitatimende esinesibindi esisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kwigumbi.
- Ubungakanani beebhodi - sebenzisa inkuni okanye uluhlu lwesinyithi ngaphezulu kwesitovu ukwenza indawo egxile kwigumbi lokuphekela.
Izixhobo ezinemibala-i-oveni iphalaza ulusu lwayo olukhazimlayo xa kuthethwa ngokuqaqambisa izitovu zoluhlu lwezorhwebo.
-Khumbula isinki-indlu yendlu esefama enombhalo inokongeza iinkcukacha kwizinki zentsimbi ezingenazintsimbi kunye nefayipu engenazandla.
-Bonisa iikhawuntari- imiphezulu yeetafile zekartz zinokuxhathisa ukuchitheka, ubushushu kunye nokukrwela.
-Sebenzisa i-backsplash-i-backsplashes yesiko enemibala egqamile kunye neepateni ezenza ukuba uyilo luphela lubumbane.
-Ukukhethwa kombala - mhlophe kuyathandwa nangona imibala engwevu kunye nemibala ethambileyo efana neblue noluhlaza nayo iyahamba.
- Iikhabhathi-zidibanise kwaye zitshatise imibala yokwenza ngokwezifiso ukuqaqambisa onke amacandelo egumbi nokwenza iikhabhathi zibonakale zingaqhelekanga.
Amakhitshi amhlophe khrimu yesityalo nokuba amakhitshi ayilelwe ngombala omhlophe ngokupheleleyo okanye ngomnwe wokuthinta omnye umbala. Ayikhe iphume ngesitayile kuba iyakwazi ukudibanisa nakweyiphi na indlu. Uyilo olumhlophe lubonisa ukucoceka kunye nokutsha kwaye ezi mpawu zimbini zichaza kakuhle ikhitshi elihle. Ukugqitywa kokugqitywa kungabandakanywa njengokuba nelitye lendalo okanye i-hardwood flooring.
Jonga igalari yethu ye Uyilo olumhlophe lwekhitshi
Iikhabhathi ezimnyama ezigciniweyo zongeza ubunewunewu kwimeko yekhitshi. Banceda ekwenzeni isiqithi sendawo sibonakale siqaqambile. Ezi ntlobo zekhabhathi zilunge kakhulu kunqamaniso lweemabhile. Iikhabhathi ezimnyama zisebenza ngokugqibeleleyo kwiindawo ezinkulu ezivulekileyo apho imibala yeendonga ilula. Yiba neendawo zangaphakathi zeekhabhathi ezinemibala elula yokulinganisela. Yiba nokwahluka kumgangatho wokudalwa kwendawo edlamkileyo.
Jonga igalari yethu ye uyilo olumnyama lwekhitshi
Njengenxalenye yocwangciso lwekhitshi lakho, luthathele ingqalelo uhlahlo-lwabiwo mali. Faka iinjongo zakho ekubekeni ikhitshi ngendlela oza kukwazi ngayo ukusebenzisa imali encinci. Usenokuba uphupha ikhitshi elikhulu njengenxalenye yendlu yakho kodwa qiniseka ukuba uza kusebenza kuhlahlo-lwabiwo mali olufanelekileyo. Ayizukuba yimvakalelo emnandi yokufezekisa uhlobo lwekhitshi oyifunayo kwaye ukubuyisa unezixa ezikhulu zamatyala.
Xa uxhasa ngemali iprojekthi yakho ekhitshini, unokuthatha ingqalelo kwezi ndlela zokhetho:
-Ikheshi-Imali-mboleko yomntu-Imali-mboleko yeBhanki- Imali mboleko yekhaya okanye imali-mboleko yezindlu
Kuya kuba luncedo olukhulu xa uthetha nengcali eqinisekisiweyo yoyilo lwekhitshi. Ngokuqinisekileyo lo mntu uya kuba nakho ukukunceda ekumiseleni izinto eziphambili ngokubaluleka kuhlahlo-lwabiwo mali. Ingcali iya kuba luncedo olukhulu kuthintelo lwakho ekuchitheni izixa ezikhulu ezingafanelekanga kwindawo ethile yekhitshi.
Apha ngezantsi kukho amanyathelo abalulekileyo okugcina iprojekthi yakho yasekhitshini kuhlahlo-lwabiwo mali:
1. Thatha isigqibo malunga noqingqo-mali. Nje ukuba uthathe isigqibo ngento ofuna ukuyichitha qiniseka ukuba iya kunamathela kuyo njengoko uqhubeka. Yazi ngokwakho ukuba uya kuba nakho kangakanani ukuhlawula kwisigaba ngasinye seprojekthi yakho yokulungisa. Jonga iimali zakho ukujonga isixa semali onokujongana nenkcitho.
2. Yiba nolwazi ngokwaphuka kweendleko. Ezi ndleko zingabandakanya inkcitho kwezi zilandelayo: iikhabhathi, izixhobo zombane, izinto ezenziwayo, iifestile, izixhobo, kunye nomsebenzi. Kubalulekile ukwazi izinto ozikhethayo malunga nemibala yodonga, iingcango zekhabinethi, izixhobo zombane, kunye nolunye uhlobiso lwekhitshi ukunqanda utshintsho olunamaxabiso kamva.
3. Bekela bucala ama-20% ohlahlo-lwabiwo mali. Kubalulekile ukuba uzakubeka bucala amashumi amabini eepesenti kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho kuba ngokuqinisekileyo kuya kubakho iindleko ezingalindelekanga eziza kuvela.
4. Yiba noluhlu lwezinto eziphambili ekhitshini. Ngaba unezinto eziyimfuneko ngokupheleleyo ofuna ukuzibona kwimodeli yakho? Beka bucala imali yezinto ezinje ngezixhobo ezitsha kunye neekhabhathi ezintsha ukuze ubenamacandelo afunekayo ekhitshini kunokuba ungabinazinto ziluncedo.
5. Uya kuyifumana njani imali efunekayo yokulungisa ezo zinto zilungisiweyo. Yiba nolwazi malunga neenkcukacha malunga nendlela oza kuyibhatala ngayo iprojekthi ukuze ukwazi ukuba ungakanani uhlahlo-lwabiwo mali. Oku kunokubandakanya izinto ezinje ngokulondolozwa, ibhonasi yenkampani, ukujika kwirhafu, imali mboleko yomntu okanye enye into.
6. Ngaba uyakuphila ngokulungiswa ngokutsha? Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uza kuhlala ekhaya ngelixa ikhitshi lisenziwa okanye uza kuhlala kwenye indawo. Ukuba uza kuhlala kwenye indawo, jonga iindleko zendlu okanye zeefizi zokuhamba. Ukuba uza kuhlala ekhaya, ungathatha ingqalelo yokubeka ikhitshi lethutyana kwigumbi elikufutshane kwaye uqiniseke ukuba unayo njengenxalenye yenkcitho yakho ukuze ukwazi ukusebenza kuhlahlo-lwabiwo mali.
7. Dibanisa zonke iindleko ezinxulumene noko ukongeza kuhlahlo-lwabiwo mali. Bandakanya kuhlahlo-lwabiwo mali iindleko zokutya ngaphandle njengendawo yokutyela kuba uya kuba utya ixesha elininzi ngaphandle kwekhaya xa kusetyenzwa ekhitshini.
8. Yenza ispredishithi sohlahlo-lwabiwo mali. Ukuba nespredishithi onokujonga rhoqo kuya kukunceda ugcine uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwindlela elungileyo.
9. Misela ukuba yintoni onokuyenza ngokwakho. Olunye umsebenzi wokulungisa ungenziwa wedwa. ukwenza ngokwakho kuya konga iindleko zomsebenzi kwaye kufuneka kubalwe ekuqaleni.
10. Qiniseka ukuba uyakuphepha ukongeza. Kulula ukuhendeka ukongeza ezinye izinto ezingeyonxalenye yoyilo lwekhitshi kuhlahlo-lwabiwo mali. Nje ukuba usete uhlahlo-lwabiwo mali, naka ingqalelo yokuhlala ngaphakathi kuyo ukunqanda ukophula ibhanki.
Itafile ibhekisa kwindawo ethe tyaba ekhitshini okanye kwiindawo zokulungiselela ukutya. Ngokwesiqhelo, ifakwe ngenkxaso yeekhabhathi. Imiphezulu yeetafile zenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezineempawu ezahlukeneyo zokuqina, ukusebenza, kunye nobuhle.
Imiphezulu yeetafile ikunika indawo yokusebenza kunye neqonga lokubeka izixhobo ezifanelekileyo kunye nezixhobo. Banikezela ngento entle, evulekileyo apho unokubonisa ngobuchule izinto ezimbalwa zokuhombisa. Ngelixa unokuba ne-countertop kwamanye amagumbi, zibaluleke kakhulu kwiikhikhini nakwiindawo zokuhlambela.
Ekhitshini, kwi-countertop kulapho unokwenza khona ukulungiselela ukutya okuyimfuneko, njengokucheba imifuno, ukuxuba izithako, okanye ukukhupha intlama. Banikezela umphezulu ozinzileyo apho ungasebenzisa izixhobo ezifana nezihlanganisi kunye neeprosesa zokutya.
Kukho iipateni ezininzi, imibala, kunye nezinto ezenziwe ngezinto onokuzikhethela eyakho imiphezulu yeetafile ekhitshini . Apha ngezantsi kukho izinto ezaziwa kakhulu ezisetyenziselwa imiphezulu yeetafile:
Ilitye lendalo yeyona nto ixhaphakileyo esetyenziselwa ii-countertops kulwakhiwo lwamakhaya amatsha kwaye ibandakanya oku kulandelayo:
Granite - ithathwa njengezona zinto ziyaziwayo zethegi yendalo. Iza ngemibala eyahlukeneyo eyahluka ukusuka kwi-variegate browns kunye ne-blues edlamkileyo ukuya ezinzulwini zobusuku ezimnyama, ezimhlophe ezimhlophe, kunye nobomvu obunzulu. Ungabona iindidi ezahlukeneyo ze Imiphezulu yeetafile zegranite kweli phepha.
Ilitye lesepha - ihlala imnyama ngombala luhlaza-mnyama ngombala nangona kunjalo. Ii-slabs eziluhlaza-grey ziqhelekile. Kuyimfuneko ukuba kutywinwe ngeoyile yezimbiwa ukunciphisa ibala.
Isilayidi -Ilitye elishinyeneyo kakhulu eliboniswe ngemibala efihlakeleyo kubandakanya obomvu, oluhlaza, ngwevu, mnyama, nemfusa. Ayisiyonto ingena ngaphandle kwaye yeyokugcina simahla.
Quartz -Esi sesinye sezona zinto zinzima emhlabeni ezenza ukuba zilungele indawo enganyangekiyo. Ndwendwela eli phepha ukuze ufunde ngakumbi nge iingenelo kunye neengozi zeetafile ze-quartz .
Marble - ngobuhle beklasikhi izixhobo zemarble kunzima ukubetha. Ziyakwazi ukumelana nobushushu kwaye ziyafumaneka ngokubanzi. Unokufunda ngakumbi malunga iingenelo neengozi zokubala kweemabhile kweli phepha.
Izinto zomhlaba eziqinileyo zenziwe nge-100% ye-polyester, i-100% ye-acrylic, okanye i-poly edibeneyo kunye ne-acrylic. Bayakwazi ukuxhathisa kakhulu ukukrwela kunye namabala. Ezi ndawo zinokuhlaziywa okanye zilungiswe. Unokwenza isanti ngaphandle kokutsha kunye nokukrwela kunye nokugcwalisa iiggeji ezinzulu.
I-laminate yeplastikhi yinto enxibe nzima enokomelela, ekwaziyo ukuphila iminyaka eliqela kwanezona khitshi zinzima. Yenziwe kwiphepha lekraft elifakwe kwi-resins kwaye ziza imibala eyahlukeneyo, iipateni kunye nokuthungwa. Uhlobo olulungileyo lwe-laminate kwii-countertops yi-1/16-in-thick-purpose purpose.
I-Ceramic tile isondlo esisezantsi kwaye ingasetyenziselwa indawo yokusebenza yesibini. Isetyenziselwa i-plywood substrate okanye ngaphezulu kweetafile zeplastiki esele zikhona.
Iikhawuntari zomthi zihlala zenziwe ngemephu eqinileyo ekwabizwa ngokuba yi-rock-maple, yona ingumthi onzima kakhulu. Eminye imithombo yeenkuni ivela kumnatha, oki, itiak kunye necherry. Umthi wenziwe ngengqolowa yokuphela, ukutya okuziinkozo, okanye iplanga ebanzi. Ukugqitywa kweetafile zokhuni kusetyenziswa ivanishi okanye ioyile yezimbiwa. Izixhobo zokubala zeebhloko zeenkuni zifunwa ngabapheki ngenxa yokuba zihle kwaye ziyasebenza. Nangona kunjalo, zokubala iinkuni ngenxa kufuna ulondolozo ngakumbi kunye nokhathalelo ukugcina ubuhle babo emva kwexesha kunye nokusetyenziswa.
Ikhonkrithi njengezinto zokubala icaba ceke kakhulu kwaye ibonakala igudile. Kuhlala malunga nesiqingatha se-intshi ubukhulu. Ukufezekisa imibala eyahlukeneyo, ii-pigments zinokongezwa kwikhonkrithi xa kuxutywa. Amacwecwe ke ayalolongwa aze atywinwe wakuba unyangelwe ukuthintela ibala. Ukuqhekeka zezona ngxaki ziphambili zekhonkrithi kodwa oku kungasonjululwa kusetyenziswa umnatha wocingo, imicu ye-fiberglass, okanye ibha yentsimbi yokuqinisa ikhawuntari.
Imiphezulu yeetafile yekhitshi yimiphezulu esebenza njengebhentshi yokusebenza ekhitshini. Iindidi ezahlukeneyo zeetafile zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo. Tyelela eli phepha ukuze ufunde ngakumbi nge iintlobo zemiphezulu yeetafile ekhitshini .
Laminate - iyafikeleleka, inokugcinwa ngokulula, kwaye ineentlobo ngeentlobo zeepateni kunye nemibala.
Umphezulu oqinileyo -Inokuhlaziywa ngokubhekisele kwimikrwelo kunye nokusikwa ngokudibanisa. Inokuvumela ukusetyenziswa kweesinki ezidityanisiweyo apho kungayi kubakho kubonakala ebonakalayo phakathi kwecomputer kunye nesinki. Akukho porous kwaye iyafumaneka kwiipateni ezininzi kunye nemibala.
Ilitye lendalo -Ubuhle bayo bendalo obungenakuphindwa ngabo benziwe ngumntu. Ukuba ngolondolozo olufanelekileyo, luyakwazi ukuhlala ixesha elide okanye ngonaphakade. Unonyamezelo olukhulu kubushushu xa kuthelekiswa nezinye iindawo ezikwi-countertop.
Umthi - Inomtsalane wobuhle. Inika indawo yokusika efudumeleyo kunye elungileyo.
Ikhonkrithi -Inokwenziwa kwisitayile esahlukileyo, imilo, okanye umbala. Inokudityaniswa kwezinye iipateni zokuhombisa.
Ithayile - yomelele kwaye iyakwazi ukunyamezela ukukrwela kunye nobushushu. Iyakwazi ukumelana namabala. Yonga iindleko.
Izimvo zoyilo olukhulu lwekhitshi ziqala ngekhabhathi oyikhethileyo. Izitayile zekhabinethi yasekhitshini zihlelwe ngokwendidi eziphambili, kwaye ezo uza kuzikhetha ziya kugqiba isitayile sakho sekhitshi. Ukuba ucinga ngokulungisa ikhitshi lakho kubalulekile ukuba ukhethe ngononophelo ikhabhathi yakho njengoko iya kuba yinxalenye enkulu yeendleko zokulungisa kwakhona.
Iikhabhathi zasekhitshini ziikhabhathi zizibhokisi zeedrowa ezisetyenziswa ekhitshini ukulungiselela izinto zesilivere kunye nezitya. Owona msebenzi uphambili kukugcina.
Uhlobo loyilo lubonisa ubuntu bakho kunye nendlela ophila ngayo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zekhabinethi ekhitshini onokukhetha kuzo ngokokhetho lwakho.
Iikhabhathi eziqhelekileyo - ezi zezona zinto zidityanisiweyo ngokwesiko kunye nolwanamhlanje. Inomxholo oqaqambileyo kunye nomoya owongeza intuthuzelo ukudibanisa izinto zakho zesitayile.
o Izixhobo ze-eclectic - isiqwenga sobugcisa bale mihla obubekwe ecaleni kwendlalifa yosapho
o Amagqabantshintshi eBold - yongeza umbala wombala kwaye inikezela ngengxelo yoyilo
o Izinto zokwakha - iarches elula okanye ukubumba kuyongezwa kuyilo luphela, ulwakhiwo kunye nohlobo lwekhabhathi
Iikhabhathi zangoku -Iimpawu zayo zezala maxesha, ziyabukeka, kwaye zinesibindi.
o Izinto zendalo ezisebenzisa isikhumba, ialuminiyam, iglasi, okanye ilitye. Ezi zinto zendalo zinokufakwa kunye nokufakwa kwekhabhinethi yeglasi yanamhlanje.
o Zimbalwa izinto ezincedisayo - ayicacanga kodwa inesibindi. Sisixhobo sezixhobo zangoku esinemigca elula kunye neyobukekayo.
o Izinto zejiyometri- izitayile zeminyango kufuneka zibandakanyeke kwiimilo ezahlukeneyo ezinjengeesangqa, imigca ethe nkqo, okanye izikwere.
Iikhabhathi zeRustic - zihlala zisetyenziswa ezindlwini okanye kumakhaya echibi nangona kunjalo zisebenza kakuhle kwizindlu eziphefumlelweyo nendalo.
o Imihombiso ephefumlelweyo ngokwendalo- ibonisa iinkozo zomthi ukuba zikhangeleke zendalo.
o Imbonakalo yelizwe, izinto ezindala - iityhubhu ezincinci zibandakanyiwe ukubonisa iidongwe zakho kunye nezinto eziqokelelweyo.
o Ipeyinti erhabaxa okanye ephelelileyo-ukwenza imbonakalo ye-rustic isebenzise imibala ethambileyo, ekhangeleka emsebenzini njengombala oluhlaza okhanyayo kwiikhabhathi.
o Ipateni ngobunjani - ukongeza kwiinkuni ezigugileyo, ipateni kunye nokuthambeka kubandakanywa nokusetyenziswa kweekhabhathi.
Iikhabhathi zemveli - ezi zinhle, ziyamema kwaye zifudumele. Lihombisile kwaye lihombisile. Uhlobo loyilo lwayo lugcina ukucoceka kokulinganisela kunye nokulinganisa.
o Iipatheni kunye nemisonto - ibonisa ubuhle.
Zonke iindlela zokugqiba zakha enye yohlobo lwekhabhinethi. Inika ubuhle obuhlaza, ubunzulu, kunye nombala weenkuni. Ukugqitywa kwayo kwenza ukuba ikhabhathi yekhitshi ibonakale intle. Kubalulekile ukuba ubuhle bendalo bomthi buphuculwe ukugqiba. Iibhasikithi kufuneka zomelele kwaye zinganyangeki kukrwela. Ngapha koko, kufanelekile ukuba ikwazi ukumelana neekhemikhali zasekhaya kunye ne-UV ukuze zikhuselwe ekuwohlokeni okuqhelekileyo nasekukhaleni.
Ukugqitywa kwebala - ibala lixutywe ngokulingeneyo ngesanti ngaphandle komhlaba okanye kwikhabhinethi.
Glaze -Ngumbala ocacileyo ongacacanga owongezwa kumabala ukuqaqambisa kunye nokugxininisa iinkcukacha zomnyango wekhabhinethi.
Ipeyinti igqityiwe -Iqalwa ngenkqubo yesanti ngokudityaniswa kwamalungu ukuze ibe nomphezulu ogudileyo. Ingubo yangaphambi kokutshiza ilungiselelwe umphezulu ukulungiselela isicelo se-topcoat.
I-glaze ngokukhawuleza - ifakwe ngaphezulu kwepeyinti usebenzisa ibrashi encinci. Uyilo lwayo kukugxininisa iinkcukacha zomnyango wekhabhinethi ngaphandle kokuchaphazela umbala wepeyinti yesiseko somnyango.
Ukudinwa -Injongo zayo kukuba iinkuni zibonakale ngathi zibonakalisiwe elangeni, emvuleni nasemoyeni iminyaka. Iikhabhathi ezixinzelelekileyo lolunye ujongo oluye lwafumana ukuthandwa kule minyaka imbalwa idlulileyo. Le nkqubo yekhabhinethi enzima ayinzima njengoko ivakalayo kwaye inokwenziwa ekhaya njengeprojekthi ye-DIY.
Ipeyinti yelifa lemveli -Yenza uthotho lwembonakalo yakudala-yehlabathi. Oku kufezekiswa ngokusetyenziswa kwemibala yokugqiba imibala, i-glaze, kunye neendlela ezahlukeneyo zokucinezela isandla.
Indlalifa igqibile -Kwenza imbonakalo yakudala.
Ugqibile uPatina -Imiphetho engaphandle kunye neekona zihlanjwa ngumoya ngokwenza i-patina eyahlukileyo.
Ithini ibhayibhile ngokuthanda umfazi wakho
Iikhabhathi zasekhitshini zenziwe ngezinto ezininzi ezinamalungu athile enziwa ngokudityaniswa okwahlukileyo ukuze kunikwe iziphumo ezichanekileyo nezomeleleyo. Apha ngezantsi kukho izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa ekwenzeni iikhabhathi:
Uxinano oluphakathi fiberboard - ngumthi owenziwe ngobunjineli owomeleleyo nozinzileyo. Ngokumelana nokulwa, indawo egudileyo yenziwe ilungele ukupeyinta, ukupeyinta kunye nokwenza veneering.
Icandelo lebhodi -Iyenziwe ngeetshipsi zomthi okanye ngeeshafini ezicinezelweyo kwiibhodi. Inokuzinza okukhulu ngokuchasene nokuncipha kunye nokujijisana okuhlala kubangelwa kukufuma.
Imithi eqinileyo - Awona mthi ulukhuni uthandwa kakhulu osetyenziselwa iikhabhathi ziyi alder, oki, maple kunye necherry.
Iikhabhathi zesitokhwe zenziwe kwangaphambili kwaye ezi ziza ngeendlela ezicacisiweyo, izitayile kunye nokugqitywa. Uninzi lwezi luxhomekeke kubume kunye nobungakanani bekhitshi kunye neenyawo zomgama wekhabhathi ezifunekayo. Iikhabhathi ezisisiseko, kubandakanya phezulu kunye nezantsi, ekhitshini elinobungakanani beenyawo ezili-10 × 12 zihlala zibiza malunga ne-4,000- $ 5,000 nangaphezulu kwaye oku akubandakanyi ukufakelwa kweetafile.
Iikhabhathi ezinesiko elinokwakheka emva kokubekwa kweodolo yakho. Ziphindaphindwe kabini kwiindleko zesitokhwe eziqala kwi- $ 8,000- $ 10,000 ngeendleko ezonyukayo zokugqitywa ngesandla, iiglasi, amaplanga angaqhelekanga, kunye neepateni ezintsonkothileyo. Iikhabhathi ezenziwe ngoyilo zoyilo oluthile zixabisa malunga namaxesha amane amaxabiso esitokhwe ukusuka kwi- $ 16,000- $ 20,000 nangaphezulu, ngaphandle kofakelo kunye neetafile.
Uhlobo lwesango lomnyango wekhabhathi kufuneka lisebenze kuyilo kunye nomxholo ngokokukhetha kwakho.
Iphaneli yeflethi -Iphaneli yeziko ithe tyaba kwaye le minyango ikhethwayo kuyilo olucekeceke nolucocekileyo. Oku kunokusetyenziswa nangasiphi na isitayile esifana notshintsho, ngokwesiko, nangoku.
Iphaneli ephakanyisiweyo -Iphaneli yeziko iphakanyiswa nge-contour okanye iprofayili. Isebenza kakuhle kutshintsho nakwimveli.
Isilayidi - ngumnyango oqinileyo ngaphandle kwepaneli okanye isakhelo esisetyenziswa kuyilo lwangoku kunye notshintsho.
Mullion kunye nesandi -Ayisetyenziswanga ekhitshini xa iyonke kodwa isebenza njengesixhobo sokuhombisa kubandakanya iingcango ze-mullion, iingcango zeglasi, iingcango ze-louver, iingcango zeglasi ezikhokelwayo, iingcango zesakhelo sealuminium, nezinye ezininzi.
Iindlela ezakhiweyo iikhabhathi zekhitshi ziyahluka ngokuxhomekeke kubavelisi nangona kunjalo zihambelana nezindlela ezimbini zoyilo ezisisiseko.
Ulwakhiwo olwenziweyo - iikhabhathi zibandakanyiwe ngamaplanga ajikeleze imiphetho engaphandle yebhokisi yekhabinethi. Isakhelo sobuso sinikezela ngqongqo kwibhokisi yekhabinethi enceda ukuhlala ibhokisi yomelele kwaye isikwere. Iikhabhathi ezinemizobo zinokugubungela ucango apho umnyango uvale isakhelo sobuso.
Ukwakhiwa okungenasiphelo -Ifikeleleka ngakumbi kuba akukho ngaphakathi komda wesakhelo esinokuthi sibambe umda wokuvulwa kwekhabhinethi. Isixa saso sikhulu ngenxa yebhokisi enkulu yeedrowa.
Ukucokisa iikhabhathi zasekhitshini kunceda ekwenzeni indawo yokuhlala kunye nokunyusa ixabiso lekhaya lakho. Ngumsebenzi olula nongabizi mali ingako yotshintsho lwekhitshi uye kwindawo oyithandayo yokubutha. Qinisekisa ukuba unezixhobo ezifanelekileyo kunye nonikezelo. Emva kokugqiba izinto ezifunekayo, susa iingcango zekhabhinethi, izibambo, ubuso beedrowa, okanye ezinye izixhobo zekhompyutha.
Ungalibali ukubeka iilebheli ngokokubekwa kwazo kwiibhokisi zekhabhinethi. Isanti ngokupheleleyo kwisiphelo usebenzisa isandander sombane kunye nephepha elinzima lesandpaper. Le yenzelwe isanti yokuqala kuba isandpaper ecolekileyo iya kusetyenziselwa isanti yesibini.
Ukulandela inkqubo yesanti, sebenzisa ibala usebenzisa irag ngokuzihlikihla emthini. Ukucokisa yindlela emangalisayo yokufumana ukubukeka okutsha, okutsha kunye nokwenziwe ngomthi okwenyani kwiikhabhathi zakho ekhitshini ongakwaziyo ukufikelela kuzo usebenzisa ipeyinti.
Xa isiza Umgangatho wekhitshi zininzi izinto onokukhetha kuzo. Uhlobo ngalunye luneempawu ezahlukeneyo kunye nezibonelelo zokuqwalaselwa. Apha ngezantsi siqokelele eyona pro kunye ne-con's yohlobo ngalunye lwekhitshi lomgangatho ekhitshini ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona ilungele wena.
yendalo wokhuni oluqinileyo intle kwaye iziva imnandi phantsi kweenyawo. Kukho iintlobo ngeentlobo onokukhetha kuzo. Uninzi lweplanga oluqinileyo oluqhelekileyo luza kwi-cherry, i-ash ash emhlophe, i-ipe, i-hickory, i-pecan, i-maple, i-maple ebomvu, i-oki kunye ne-oki ebomvu. Iindidi ezahlukeneyo zibandakanya iTigerwood, iBrazil Cheery, kunye neAfrican Teak.
Abo bathenga umthi onzima ongagqitywanga banokuwudyobha nawuphi na umbala abawufunayo, okanye bawushiye ukwimeko yawo yendalo. Inye into ekufuneka uyithathele ingqalelo kukuba umthi onzima unovakalelo kakhulu kufume kwaye ngenxa yesi sizathu i-topcoat ecacileyo ihlala isetyenziswa emva kwesanti kunye nebala ukuba uyafuna.
Ukufaka i-hardwood ihlala iza njengesiqwenga somthi ngolwimi kunye nokufakwa kwe-groove. Ukusukela ukuba iyimveliso yendalo iya kwanda kwaye ikhontrakthi ngenxa yotshintsho lwamaxesha onyaka. Ebusika xa abaninimzi beqhuba i-heaters yabo i-flooring yeplanga inokwenza isivumelwano kunye nokwenza izithuba phakathi kweeplanga.
Njengomthi onzima, iinkuni ezenziwe ngobunjineli zenziwe ngezinto ezintathu okanye nangaphezulu zezinto ezincamathelisiweyo kunye nocingo oluphezulu. Ngokwesiqhelo kuthengiswa ngeplanga ezinde, iinkuni zokwakha nokwadala iyamelana nemiba yobushushu kunye nokufuma kunokhuni oluqinileyo lwendabuko. Ukongeza inqaku lamaxabiso liphantsi ngokubanzi.
Kuba iiplanga zobunjineli zilungelelene ngokudibeneyo, ukufakelwa kunokuba yinto snap. Ezi planga zihlala ziphakathi kwe-3 kunye ne-intshi ye-7 ububanzi kwaye ubude zi-7 ukuya kwi-8 yeenyawo. Ngokuqhelekileyo zijikeleze i-3/8 ukuya kwi-3/4 intshi.
Umgangatho weLaminate uyafana nomthi wobunjineli kwaye wenziwe ukuba ubukeke njengokhuni lokwenyani. Iilaminates zinokujongeka kakhulu njengokhuni lokwenyani kunye nokugaya kunye nokufunyanwa okufumaneka kwimveliso yendalo. Inezinto ezine ezahlukileyo ezidityaniswe kunye ukwenza izinto ezizinzileyo. Amacwecwe amane aluhlu lokunxiba, uyilo loyilo, isiseko sangaphakathi, kunye nenkxaso.
Umgangatho olaminethiweyo uhlala ulukhetho olukhulu kwabo banolwazi ngohlahlo-lwabiwo mali kwaye bafuna into yomelele kwaye intle. Umgangatho olaminethiweyo kulula ukuwufaka kwaye wenziwe ukuba ubonakale njengokhuni lokwenyani. Xa ufaka i-laminate akukho zikhonkwane okanye i-glue efunekayo yokwenza iprojekthi efanelekileyo kwi-DIYer.
Ithayile yomelele kwaye yenza ukhetho olukhulu ekhitshini. Iiceramic, i-porcelain kunye neethayile zamatye zihlala zisetyenziswa kwiiprojekthi zekhitshi. Ngaphandle kwezi zintathu, iithayile zeceramic zezona zibiza kakhulu. I-Porcelain inexabiso embindini ngelitye lendalo phezulu xa kuthathelwa ingqalelo indleko.
Iithayile ze-Porcelain ziyiseti yeethayile zeceramic. Iithayile zeceramic rhoqo zenziwa ngokudibanisa udongwe, isanti kunye nezinye iiminerali. Iithayile ze-Porcelain zenziwa kusetyenziswa isanti kunye nezinye izinto ezihlaziyiweyo phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo ngexesha lokudubula kweloveni. Ngesi sizathu iithayile ze-porcelain zixinene kuneethayile zeceramic.
Ezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu ngamatye emvelo zibandakanya i-marble, i-limestone, i-travertine, i-slate kunye ne-granite. Ilitye lendalo lihlala ixesha elide, kodwa nangona kunjalo ilitye kufuneka litywinwe rhoqo ukugcina ubuhle balo.
Iphepha le-vinyl, iithayile ze-vinyl kunye ne-linoleum, zithathwa njengomgangatho othambileyo obonelela ngokuzinza, kunye nokusebenza okuhlala ixesha elide. Umgangatho weVinyl unikezelwa kwiipateni ezahlukeneyo, imibala kunye noburhabaxa. Ngeethayile ze-vinyl unokulinganisa ubuhle bamatye endalo anje nge-travertine, isileyiti, kunye nemabhile okanye ujonge umgangatho weplanga. Ezinye zezibonelelo eziphambili ze-vinyl kulula ukuyicoca, ngexabiso eliphantsi, kwaye kulula ukuyifaka.
Ukufakwa kwe-vinyl flooring kuyahluka, nangona kunjalo kuhlala kufakwa ngenkqubo yokulala evulekileyo. Oku kuthetha ukuba i-vinyl inokubekwa phantsi ngaphandle kokuncamathelisa ukwenza inkqubo ikhawuleze kwaye ingabinasimahla. Xa uyifaka kuqhelekile ukuba utshintshe imibala okanye uyilo ukwenza umgangatho wepateni.
Iziqithi zasekhitshini zibukeka zinomtsalane, kwaye zibonelela ngokulungiselela ukutya, ukugcinwa kunye nokutya kwindawo yokutya. Ukuba unethamsanqa lokuba unendawo enkulu eyoneleyo yokuhlala isiqithi sekhitshi kukho iintlobo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Apha ngezantsi kukho ezinye zeentlobo ezithandwayo kunye nemisebenzi enikezelwa ngabantu abadumileyo Uyilo lweziqithi zasekhitshini .
Isiqithi kunye neCooktop
Isiqithi seBlock Island
Ukulinganisa ikhitshi kubalulekile xa usenza iprojekthi yekhitshi. Apha ngezantsi kukho amanyathelo ngeendlela zokulinganisa ikhitshi.
1. Qiniseka ngokuchaneka. Kuyimfuneko ukusebenzisa iteksi umlinganiso, umda othe ngqo, kunye nephepha legrafu.
2. Yenza imilinganiselo ngokwexesha. Yiba nokurekhodwa kobude bebonke kodonga oluqala kwicandelo lasekunene elijikeleze igumbi. Ungalibali ukubeka iilebhile ezindongeni, kwiminyango nakwiifestile usebenzisa amanani.
3. Kuya kufuneka ubenobubanzi nokuphakama. Yiba nemilinganiselo ethe tye yeendonga. Imilinganiselo ethe nkqo ingabandakanya oku kulandelayo: umgangatho wefestile, ifestile ukuya phezulu efestileni, umphezulu wefestile ukuya eluphahleni, emva koko kumgangatho ophahleni.
4. Khangela iziko lakho. Yiba nesalathiso somgca osembindini wazo zonke izinto ezisisigxina kumlinganiso ngamnye kunye ne-oveni yodonga, iisinki, uluhlu, iingcango, iifestile, iikhabhathi, imibhobho, kunye nevenkile.
5. Isinxibo kufuneka sibandakanywe. Kumlinganiso weefestile neengcango, istili kufuneka sithathelwe ingqalelo njengenxalenye yomnyango okanye yefestile. Yenza imilinganiselo ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye lomnyango okanye i-trim yefestile kwaye ukusuka ngaphandle kwe-trim ukuya kwinqanaba eliphakathi lomnyango okanye iwindow.
Nokuba uyayithanda i-DIY, yokulungiswa kwekhitshi, kungcono ukuba uginye ikratshi lakho kwaye uqokelele imali ukuze uthethe nomyili onamava kwangaphambili. Ukulungiswa kwekhitshi kunokuba yindleko, kunzima kunye nokuchitha ixesha. Umyili wekhitshi onamava uya kwazi amaqhinga amaninzi ukuze afumane eyona ndawo yakho kwaye uya kuqhelana nezinto ezixabisa kakhulu kwaye angade akukhombise nakwiikontraka ezilungileyo zasekuhlaleni kunye nabathengisi.
Umyili wekhitshi uya kuba nakho ngaphakathi ngaphakathi kwimikhwa emitsha kunye nezixhobo, kwaye uya kuyazi iikhowudi zokwakha kwindawo yakho. Ubungcali babo bunokukugcina ungenzi mpazamo zibiza kakhulu.
Eyona ndlela yokufumana umyili wekhitshi olungileyo kukubuza ujikeleze kubahlobo kunye nabantu obaziyo kwindawo ohlala kuyo. Unokufumana umyili olungileyo ngokusebenzisa uluhlu lwe-intanethi kunye newebhusayithi yeSizwe yeKhitshi kunye neBhafu (nkba.org).
Xa ufumana umyili onokubakho, qiniseka ukuba ucela ukubona iisampulu zomsebenzi wangaphambili womyili. Xelela umyili ngezimvo onazo kunye nezitayile ofuna ukuzibandakanya kwaye ubuze ukuba ingaba bayenzile na le projekthi ngaphambili. Ngcono okwangoku, buza ukuba uyawubona na umzekelo weprojekthi ethile. Oku kuyakwenza ukuba ubenokubona ngcono ukuba umyili ngumdlalo ofanelekileyo kuwe kunye nembono yakho yekhitshi lakho lamaphupha.
Xa udibana nomyili, kungcono ukuba unendawo yoyilo loyilo okanye ukulinganisa umzobo wekhitshi esele ikho ukubonisa. Izicwangciso kufuneka zibonise indawo yeefestile kunye neengcango kunye nokufudumeza, iindawo zombane kunye nemibhobho yamanzi. Kuya kufuneka ulungele ukubaxelela izimvo zakho malunga nento oyifunayo ekhitshini lakho lamaphupha.
Nokuba ngexesha leentlanganiso zokuqala, kungcono ukuba ucace gca kwaye ucace malunga nemibono yakho kunye nento oyinqwenelayo ekhitshini lakho lamaphupha. Oku kukuqinisekisa ukuba wena kunye nomyili wakho niyaqondana kwasekuqaleni. Unoluhlu lweminqweno lwayo yonke into ofuna ukuyiphumeza ngokulungisa.
Enye into elungileyo ukuba nayo kwaye ubonise umyili wakho iya kuba yincwadi eneenkcukacha okanye incwadi ye-scrapbook. Yiba nemifanekiso yeekhitshi kunye namanqaku aphezu kwekhitshi ocinga ukuba ungathanda ukuba nayo ekhitshini lakho. Wena kunye nomyili wakho niyaqala ngokuxoxa malunga nokwenzeka kwezi zinto kwindawo yakho.
Ngaphandle kokuxelela umyili wekhitshi into ofuna ukuba nayo ekhitshini lakho lamaphupha, kuya kufuneka ubaxelele ukuba uzimisele ukuchitha malini. Baza kuba nakho ukukuxelela ukuba amaphupha akho ayangqinelana nohlahlo-lwabiwo mali kwaye bacebise ngezinye iindlela ezinokuthi zibe nempembelelo oyifunayo kuhlahlo-lwabiwo mali ozimisele ukulisebenzisa.
Ukufumana ikhontraktha elungileyo kunokwenza okanye kophule imodeli yakho yasekhitshini. Ikontrakta ngokubanzi okanye yokwakha ngumphathi weprojekthi yokulungisa ikhitshi lakho. Ngabo abaya kongamela iprojekthi kwaye babone imisebenzi yemihla ngemihla yokwenza ikhitshi lakho lamaphupha libe yinyani.
Ikhontraktha elungileyo inokukunceda ufumane izixhobo ozifunayo kwaye ukudibanise nabasebenzi abanezakhono abanokuwenza umsebenzi. Uninzi lweekhontrakthi zithatha uxanduva lokuqesha oonokontraka kwimisebenzi efana nomsebenzi wombane okanye imibhobho yamanzi.
Nangona isenokungasebenzi izandla emsebenzini, kufuneka ibekhona kwisiza ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwa ngokuchanekileyo nakwishedyuli.
Ikhontraktha elungileyo sisitshixo sokwenza ukuba ukulungiswa kwekhitshi yakho kwenziwe ngokufanelekileyo. Banokuthatha imithwalo emininzi egxalabeni lakho. Kubalulekile ukuba ukhethe ikhontraktha oyithandayo kwaye uyamthemba. Jonga ngaphezulu kwekontraka enye, baxelele ngomsebenzi kunye nento oyifunayo. Babuze imibuzo embalwa ukujonga ukuba kunjani ukusebenza nabo.
• Unexesha elingakanani ukushishino
• Ukhe waziphatha iiprojekthi ezifanayo nezam? Zingaphi?
• Ngubani omnye oya kuthi usebenze kule projekthi?
• Ngaba unephepha-mvume kunye ne-inshurensi?
• Ungandinika izalathiso?
Umbuzo wokugqibela, malunga nezalathiso ubaluleke ngokukodwa. Xa ucinga ngekontraka, kubalulekile ukuba uwuqwalasele nomsebenzi wabo. Ngokubabuza izingqinisiso, ngandlela thile ubacela ukuba bazingqine kuwe ngomsebenzi wabo.
Ikontraktha elungileyo enesidima kufuneka ikwazi ukukunikezela ngeereferensi. Qinisekisa ukuba ufumana ezona zamva nje kwaye emva koko ubatsalele umnxeba ubuze ukuba unjani na usonkontileka emsebenzini.
• Zinjani imikhwa yabo yokusebenza? Ngaba bavele xa besithi bayakufika? Ngaba babekhona kwisiza ukuze babeke esweni?
• Balilandele icebo obelichaze kunye nabo phambi kokuba uqale umsebenzi? Ukuba kukho naluphi na utshintsho ekufuneka lwenziwe, ngaba baxoxe nawe kuqala?
• Bakwazile ukunamathela kuhlahlo-lwabiwo mali?
• Ngaba banamathele kwishedyuli?
• Ngaba babelungile kwingxaki? Ngaba ikhona into engahambanga kakuhle emsebenzini kwaye bakwazi ukuyilungisa ngokukhawuleza?
Ukuba unakho, cela ikhontraktha yakho ukuba uyawubona umsebenzi abaqhubayo. Ukuya kwindawo yomsebenzi, unokufunda okuninzi malunga nekhontraktha yakho. Uyayibona indlela abasebenza ngayo ngokwenene kunye nokujonga ngcono indlela abazimisele ngayo kumgangatho womsebenzi wabo. Ukubona isampulu yomsebenzi wabo ogqityiweyo kuya kukuvumela ngcono ukuba ubone naziphi na iziphene kunye neengxaki ezingcono. Oonokontraka abagqwesileyo, abaneedumela ezintle bahlala bezona zininzi iiprojekthi, ke zilungiselele ukulinda umgangatho.
Ngayo nayiphi na iprojekthi yekhitshi, kubalulekile ukuba uqwalasele ezi ngcebiso zibalulekileyo ukuze ukwazi ukugcina uhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
1. Qala ngokuba nesicwangciso esipheleleyo sokuyila. Ifuna ukuba ibanzi kwaye ineenkcukacha. Inxalenye yoku iya kubandakanya ulwalathiso lweengcango zekhabhinethi okanye apho kubekwe khona ifriji. Yiba noqikelelo lweendleko zizonke zeprojekthi. Kuya kufuneka ubenexesha elibekiweyo lokusebenza kwiprojekthi ukuze ube nenjongo yokuba iprojekthi yokwenza ikhitshi igqityiwe nini.
2. Olona tyalo-mali lukhulu oza kudibana nalo lusezikhabhathini nakwizinto zombane. Ungazi-odola ngaphambi kwexesha kuba ihlala ithatha iiveki ezine ukuya kwezintandathu ngaphambi kokuba zisiwe. Kwakhona, uku-odola kwangaphambili kunokukunika ithuba lokufumana isaphulelo. Olunye uqwalaselo kulapho kufuneka ugcine khona iikhabhathi xa zingabekwanga ekhitshini. Uninzi lwabakhi bamakhaya bacebisa ukuba balugcine kwigaraji okanye nakweliphi na igumbi apho kungekho kufuma.
3. Kuphela yenza uhlaziyo xa kukho imfuneko kuba iindleko ziya kongeza xa uqhubeka nokutshintsha ingqondo. Unokufikelela esiphelweni kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho kuhlaziyo olungeyomfuneko ekuthinteleni ekugcineni yonke into eniyifunayo.
Cinga kancinci malunga nekhitshi oyifunayo nangakumbi ngohlobo lwekhitshi olifunayo. Ngelixa kunokuvakala kukuhle ukuba nekhitshi elikhulu eliphangaleleyo elinedinning nook kunye nebha yesidlo sakusasa, ukuba awuzukusebenzisa ezi zinto, kutheni ufuna ukuba nazo?
Cinga ngendlela yakho yobomi kunye nendawo ekhoyo osele unayo ekhayeni lakho xa ucinga ngobume bekhitshi oza kuyenza. Zibuze, bangaphi abantu abaza kusebenzisa ikhitshi kwaye uza kuyisebenzisela ntoni?
Zama kwaye usebenze ngesakhiwo sakho sekhitshi sangoku. Ukuba sele unekhitshi elimile njengo-L, ngaba kufanelekile ukongeza olunye udonga ukuze lube likhitshi elime ngo-U? Ukuba ungagcina izinto ezikhoyo ekhitshini lakho zilungile, akusayi kubakho sidingo sokwenza imibhobho ngokutsha kunye nomsebenzi wombane onokubiza imali eninzi kwaye uchithe ixesha. Unokwenza kwakhona okanye ulungise izinto ezikhoyo ezinje ngeekhabhathi, iifestile neengcango.
Cinga ngezixhobo oza kuzithengela ikhitshi lakho. Kwakhona, ukuba izixhobo osele unazo zikwimeko entle yokusebenza, cinga ukuzigcina. Nangona kunjalo, ixesha lokulungisa kwakhona lelona xesha lilungileyo lokufumana izixhobo zombane eziza kuba mnandi ngakumbi, zisebenze kakuhle, kwaye zenze nekhitshi elinemveliso ngakumbi.
Izixhobo ezonga umbane zihlala zisisongezelelo esamkelekileyo nakweyiphi na ikhitshi langoku. Ukuba ukhetha izixhobo ezisebenza ngokulula nezicocekileyo ungagcina iindleko zokugcina zisekhitshini lakho phantsi. Zama kwaye ukhethe izixhobo oza kuzisebenzisa. Ukuba awuziboni usebenzisa igajethi yekhitshi ebiza rhoqo, oko akunamsebenzi nokuba ulonga ixesha okanye usebenze ngamandla. Isixhobo ongasisebenzisiyo siza kuthatha indawo kwaye sihlanganise ikhitshi lakho.
Ukuba unako ukugcina ukukhanya kwekhitshi esele ikhona, yenza njalo. Kodwa ukuba uza kongeza ukukhanya ngakumbi cinga ukusebenzisa ukukhanya kwezibane okwangoku. Ukufakwa kwezibane ezikhanyisiweyo kunokuba yiprojekthi enkulu kuninzi lwabantu abalindeleyo. Ukufakela izibane ezifihliweyo ekhitshini lakho, kuyakufuneka usike imingxunya eluphahleni lwakho ukuze ukwazi ukongeza iintambo zombane. Ngelixa ukukhanya okuphelisiweyo okwangoku kusesitayeleni, zininzi izinto onokukhetha kuzo zokukhanyisa umkhondo okwangoku okwangakwimfuno. Ukukhanya komkhondo wangoku kunokuza kwiindlela ezininzi kunye neemilo ezinokuhambelana nesitayile sakho sekhitshi.
Gcina kwikhabhathi. Njengoko besesitshilo, ukuba iikhabhathi zakho zikwimeko entle, akukho mfuneko yokuzikhupha kwaye zakhiwe ezintsha. Yenza nje ukuba ziphinde zivuke okanye zipeyintwe. Ukuba ufuna ukongeza iikhabhathi ezintsha, zama ukunqanda iikhabhathi ezinokubiza imali eninzi kwaye ziya kuthatha ixesha elininzi ukudibana. Ukulungele-ukudibanisa iikhabhathi kuyabiza kakhulu. Zilula iiprojekthi ze-DIY ke awuyi kufuna ukuqesha omnye umntu ukuba eze azokuzifaka.
Iikhabhathi zesitokhwe zikwayindlela ekhawulezayo nexabiso eliphantsi yokufumana indawo yokugcina entsha ekhitshini elilungisiweyo. Iikhabhathi zesitokhwe zinokuza kuyilo oluninzi, iimilo, ubungakanani kunye nemibala kwaye uqinisekile ukuba uza kufumana amaqhekeza ambalwa aza kulungela uyilo lwakho lwekhitshi lamaphupha. Ungasebenzisa Isoftware yoyilo lwekhabinethi yasekhitshini ukuyila isicwangciso sakho somgangatho kwaye uncede ukujonga ukugqiba kwakho, izixhobo kunye nendawo yokugcina.
Cacisa kwaye ucacise izinto ofuna ukuzisebenzisa ekhitshini lakho, oku kubaluleke ngakumbi xa uthetha nomyili wekhitshi okanye nosonkontileka. Cinga ngazo zonke iinkcukacha phambi kwesandla, ezinje ngomgangatho owufunayo, luhlobo luni lwecomputer, indawo yokugcina, luhlobo luni lokukhanyisa, njlnjl. Kulula ukukhathalela nokugcina.
Yenza uphando kwangaphambili malunga noncedo kunye nokuubi kwezinto ezahlukeneyo ocinga ukuzisebenzisa kwiimpawu zakho zasekhitshini, apho ungazifumana khona kwaye zingabiza malini. Oku kuyakukunceda uqikelele iindleko zeprojekthi iphela kwaye zikwenze ukuba uhlale kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho. Kwakhona, ukuba awuchazi izinto, kukho ithuba lokuba ikontraka - ishiyeke yodwa-inokusebenzisa zonke izixhobo eziphezulu eziza kuzisa iprojekthi kuhlahlo-lwabiwo mali.
ulitshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho lokugqibela ngaphandle komtshato
Nick jonas kunye nomtshato we-priyanka
ngubani omele ahlawule umtshato
ukuthenga umsesane wokubandakanya ukuba uza kuchitha malini
indlela indoda emfanele amphathe ngayo umfazi ngokwebhayibhile